♪ အပစ်အခက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းများနဲ့ကွန်မန်ဒိုဂိမ်း - Battlefield Combat Nova Nation BFI v2.5.8 Apk + Mod ♫ ~ ဘလော့ခရီးသည်
♪ အပစ်အခက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းများနဲ့ကွန်မန်ဒိုဂိမ်း - Battlefield Combat Nova Nation BFI v2.5.8 Apk + Mod ♫
Battlefield Combat Nova Nation BFI v2.5.8 ဆိုတဲ့ Action Game လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကစားလို့အဆင်ပြေပြေနဲ့ ကစားနိုင်အောင် Hack ထားပြီး သား Unlimited Money ကိုတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ အမိုက်စားသေနပ်ကြီးတွေ ကျည်ဆံတွေ သွေးတွေ ကိုစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူသုံးစွဲပစ်ခက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Game ပုံကစတော့ Action Game
ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ မျက်စိ ရှင်ရှင်နဲ့ လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ပစ်ခက်ကစားရမှာပေါ့ဗျာ။ အခန်းတွေကလည်းတဆင့်ပြီးတဆင့်အများကြီးကို ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ ရုပ်ထွက်နဲ့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း အထူးကောင်းမွန်အောင်ဖန်တီး ထားတဲ့ Game
တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Apk ကို Install လုပ်ပြီးတန်းကစားနိုင်ပါပြီဗျာ။ နမူနာကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Screen Shoot တွေရိုက်ပြ ထားပါတယ်ဗျာ။
** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။